Wararka - Toban arrimood oo saameynaya saxitaanka qalabaynta qaybaha saxda ah
Toban arrimood oo saamaynaya saxitaanka qalabka ee qaybaha saxda ah
Sidaan wada ognahay, sababta howsha qaybaha saxda ah loogu yeero machining sax ayaa si sax ah maxaa yeelay habraacyada waxqabadka iyo shuruudaha habraaca waa kuwo aad u sarreeya, iyo shuruudaha saxsanaanta ee sheyga waa kuwo aad u sarreeya, iyo saxnaanta ka shaqeynta qaybaha saxda saxnaanta booska Saxnaanta cabirka, saxsanaanta qaabka, iwm, tifaftiraha ayaa soo koobaya tobanka arrimood ee soo socda ee saameeya saxnaanta ka shaqeynta qaybaha saxda ah:
(1) Wareegga wareegga wareegga wareegga qalabka mashiinku wuxuu u keeni karaa qalad gaar ah saxitaanka qalabka qaybaha.
(2) Khalad ahaanta tareenka hagaha mashiinka mishiinka ayaa sidoo kale u horseedi kara khaladaad ku jira qaabka qaybaha saxda ah ee lagu farsameeyo qalabka shaqada.
(3) Qaybaha gudbinta sidoo kale waxay sababi karaan khaladaad ku shaqeeya ka shaqeynta, taas oo sidoo kale ah waxa ugu muhiimsan ee khaladaadka dusha sare ee qalabka shaqada.
(4) Noocyada kala duwan ee qalabka iyo waxyaabaha la isku dhejiyo waxay sidoo kale yeelan doonaan heerar kala duwan oo saameyn ah oo ku saabsan saxnaanta qalabka shaqada.
(5) Marka la shaqeynayo iyo goynta, bedelida booska barta xoogga, nidaamku wuu is beddeli doonaa, taasoo sababi doonta kala duwanaansho, sidoo kale wuxuu sababi karaa heerar kala duwan oo qalad ah saxnaanta qalabka shaqada.
(6) Xoogagga goynta kala duwan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona saxnaanta goobta shaqada.
(7) Khaladaadka ka dhashay cillada kuleylka ee nidaamka howsha. Inta lagu jiro farsamaynta farsamada, nidaamka geeddi-socodka ayaa soo saari doona isbeddel kuleyl gaar ah oo hoos yimaada tallaabada ilaha kuleylka kala duwan.
(8) Qaloocsanaanta nidaamka geeddi socodka kuleylka awgood badanaa waxay sababtaa saxnaanta qalabka shaqada oo la saameeyo.
(9) Qallooca qalabka mashiinka kuleylka awgiis wuxuu sababi doonaa in qalabka shaqada uu ku xumaado.
(10) Qallooca kuleylka ee aaladda wuxuu saameyn weyn ku yeelanayaa qalabka shaqada.
(11) Qalabka shaqada laftiisa waxaa lagu qalooca kuleylka, kaas oo badanaa sababa kuleylka inta lagu jiro geedi socodka jarista.